2003 / NISSAN /CUBE | No.1 myanmar cars websiteNo.1 myanmar cars website
No.1 myanmar cars website
one stop online marketplace to buy and sell your cars
ကားကို အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုဘဲ ရောင်းပါ
Dealers & Buyers
Add Car Dealer Ads
Add Buyer Ads
2003 / NISSAN /CUBEကားတန်ဖိုးကျပ်(သိန်း) 25
Engine Capacity (in CC) : 1400
Transmission Type (Gear) : Auto
Contact no : (ဖုန်းဆက်လျှင် myanmar cars market တွင် တွေ့လို့ ဆက်သွယ်တယ်လို့ ပြောပြလိုက်ပါ)
Date Posted : 24 June, 2012
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိဝယ်ယူထားသည်။ ရန်ကုန်သို့အရောက်ဈေးဖြစ်သည်။
ကားကောင်းသည်။ ပါဝင်သည့်အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်းအာမခံသည်။
ဆက်သွယ်ရန်… Ph – 0943087356
* ကားအပိုပစ္စည်းများလည်း မှာယူနိုင်ပါသည်။ *
Share this:ShareEmailTwitterLinkedInGoogle +1Facebook
ကျွန်တော်တို့ကို Sponsor ပေးသော Car ShowRooms များဖြစ်ပါတယ်။ Showroom များကို click လုပ်ပြီး showroom တစ်ခုစီ၏ တင်ထားသော ကားများကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sponsor အဖြစ် လုပ်ပေးချင်သည့် showroom (သို့) ကားအရောင်းအဝယ်သမားများ ဖုန်း ၀၉-၇၃၂၁၀၀၄၃ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် (ရုံးချိန်အတွင်းသာ)
tnt	TOYOTA HIACE (MINI BUS)2007 DIESEL
ကျပ်(သိန်း) 440 Lakhs 2008 NISSAN XTRAIL 20X 2WD/4WD AUTO DRIVE NT31
2WD/4WD AUTO DRIVE; Petrol; 2000cc Black color 37000 km; with SMART KEY; P/S, A/C, P/W, ABS, Downhill Assist Control
Share this:ShareEmailTwitterLinkedInGoogle +1Facebook More Info
ကျပ်(သိန်း) 133 2008 Nissan AD Van Power Steering, Anti-Lock Breaking System, Air Bags,AC Good, Nissan Original TV with2CD Changer (DVD+CD),Back Camera, Engine Oil, Gear Oil, ရေတိုင်ကီ Japan Original Coolant, Battery အသစ်, Engine ခန်း Refreshing Unit Package လိုက်လုပ်ပြီး, တာယာ4လုံး + Spare Wheel ကောင်း, ကားဘီးအဖုံး + သဲကာ + ရွံ့ကာ, တစ်စီးလုံး Leather ခင်းပြီး, ထိုင်ခုံစွပ် စွပ်ပြီး, အမိုးကိုင်း အလှဆင်ပြီး, နံပါတ် လှ, Owner Book ထွက်ပြီး, မျက်မြင်ကြည့်၊ ဈေးညှိ နှိုင်း, လက်တင်စီးရန်
ကျပ်(သိန်း) 225 Nissan Caravan Mini Bus 12Seater High Roof
412 total views, 75 views today
Myanmar Cars Market သို့လာရောက်သူများအတွက် Forums ထည့်သွင်းခြင်း
ကညန မှ အခွန်လျော့ပေးသည့် ထုတ်ပြန်ချက် ကြေညာ
ကားဝယ်လျှင် အရှုံးပေါ်မည်ဟု စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီး သတိပေး
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်အစီးရေ ၅၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်စီးနှင်သူများတွင် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးအချို့ ပါဝင်နေသည်ဟုဆို
‘အ’ အက္ခရာ မော်တော်ယာဉ်များ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ရောက်ရှိ
ကားဈေး ပြန်ကျ၊ ရန်ကုန်ဝယ်လက်ကို အားပြုရောင်းနေရ
ရန်ကုန်မှာ စနစ်တကျ ကားရပ်ပါ
စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ် ကရိန်းဖြင့်သယ်ခြင်း လက်တွေ့မဖော်ဆောင်သေး
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်နွယ်သူများ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ရန်ကုန်မြို့ မှာ မော်တော် ဆိုင်ကယ် စီးနင်းနေ
Khinmaung Chin: ADဘန်းဈေးလေးတင်ပေ...
Ko Kyaw Swe: လှပါတယ်ဗျာ...
Glay Aungban: အလဲအထပ်စိတ်ဝင်စာ�...
Hmj Nazik: 110 &ရရင်ယူမယ်...
Ye Kyaw: ကြိုက်‌တယ်‌ဗျာ
honda crv 2007 ကားရောင်းသူ တစ်ဦးချင်း၏ ကားများ aung lin မှ ရောင်းရန် 125 ကား ရောင်းရန်ရှိ
surya မှ ရောင်းရန် 98 ကား ရောင်းရန်ရှိ
Ko Aung Moe Lwin မှ ရောင်းရန် 79 ကား ရောင်းရန်ရှိ
rafiqc800 မှ ရောင်းရန် 72 ကား ရောင်းရန်ရှိ
United Eleven မှ ရောင်းရန် 70 ကား ရောင်းရန်ရှိ
arkarphyo မှ ရောင်းရန် 63 ကား ရောင်းရန်ရှိ
ko naing htwe မှ ရောင်းရန် 54 ကား ရောင်းရန်ရှိ
than win မှ ရောင်းရန် 52 ကား ရောင်းရန်ရှိ
leonchinwl မှ ရောင်းရန် 51 ကား ရောင်းရန်ရှိ
Si Thu Lin မှ ရောင်းရန် 49 ကား ရောင်းရန်ရှိ
With an average daily visitors between 3000-6000, MyanmarCarsMarket.com is one of the most popular car classifieds website in Myanmar. You can also find car price as well as car news in Myanmar.
We have more than 2400 cars listed on our website and it's the largest car DB online in Myanmar!
News section features current and up to date car price in Myanmar
Find Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, BMW, Cadillac, CAT, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Dagon Jeep, Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Harley Davidson, Hino, Honda, Hummer, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, KTM, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mahindra, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Proto, Proton, Renault, Rolls Royce, Scania, SEAT, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Mazda, Hyundai, Vauxhall, Volkswagen, Yamaha Cars.
Popular Models : Toyota Caldina, Toyota Probox, Suzuki Swift, Mazda Bongo, Toyota Alphard, Toyota Harrier, Mitsubishi RVR, Toyota Kluger, Toyota Belta, Toyota Surf, Toyota bB, Toyota Celica, Daihatsu Hijet, Nissan Skyline, Mazda Demio, Super Custom, Toyota Lexus, Honda Civic.
© 2013 Myanmar Cars Market – Find cars price, cars news, cars showrooms in Myanmar Online. All Rights Reserved.	Marketed by myOpenware	Send to Email Address